Gbasara Anyị - Aviva
Aviva ka a ghọtara dị ka otu n'ime ndị na-eduga na-emepụta nke n'èzí ngwá ụlọ na China nke ikpeazụ 22 afọ. Ahụmịhe a toro ogologo na-enye ndị ahịa niile obi ike na ngwaahịa Aviva dị mma, dị mma nke ukwuu ma na-adịgide adịgide.
Na gburugburu 8000 square mita nke n'ichepụta oghere na ihe karịrị ndị ọrụ 50 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Aviva n'èzí ubi ngwá ụlọ nwere ma na-arụ ọrụ ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-amịpụta Ogologo Ogologo, Ngwá ụlọ niile na ụlọ ọrụ nrụpụta.
Anyị factory bụ ma ama maka n'ichepụta aluminum iri tent, nkuku sofas, sofa tent, eriri oche, table isi na table n'elu ma n'èzí na ime ụlọ. Site na ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ahịa ogige n'ahịa, ọ nwere ike isiri ike ịmara onye bụ onye nrụpụta a pụrụ ịdabere na ya na-arụpụta arịa dị n'èzí ma ọ bụ ndị na-emepụta ngwa ngwa dị ọnụ ala nke anaghị ewu oge.
Naanị anyị na-eji ihe kachasị mma nke ejiri aka kpuchie gburugburu ntụ ntụ aluminom maka mkpokọta arịa ụlọ dị n'èzí, na-eji ọdụm kachasị mma maka oche oche aluminom na sofa. Nke a na - enye gị ohere ịhapụ ngwa ngwa n’èzí n’afọ niile na-enweghị ihe egwu nke mmebi ihu igwe. Nke a na-agụnye nchebe site na ihu igwe oyi, na-ahụ na rattan anaghị agbawa ma ọ bụ na-agagharị, yana site na ìhè anyanwụ iji hụ na arịa ụlọ anaghị ada mbà.
Aviva si n'èzí jakị na-ezube ịnapụta trendsetting ọhụrụ anya na-mere nke gburugburu ebe obibi enyi na enyi na kasị mma ihe. Anyị na-azụta, nhazi ma nwalee akụrụngwa niile n'ime ụlọ ka anyị wee mara ihe dị na ngwaahịa anyị.
Anyị na-ewe ndị omenkà dị elu na ndị nwanyị nwere oke aka na njikwa njikwa. Ọnọdụ nlele dị mma dị na ọkwa ọ bụla nke nrụpụta site na nkwakọ ngwaahịa, na-achọpụta na ngwongwo gị na-abata n'ọnọdụ dị mma.
Ngwa ụlọ dị n’èzí nke Aviva nwere nkwa nke afọ 3 nke na-enye afọ ojuju ọ bụ ndị ahịa si gburugburu ụwa, ọkachasị ndị ahịa si UK, USA, Australia, Canada, France, Italy na Turkey. Anyị na-ezutekwa mkpa dị elu nke nnukwu ndị na-ere ahịa si Amazon.
Factory Adreesị: Block B, Dum Ewepụghị, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Mpaghara, Foshan, Guangdong, China
Ekwentị: 0086-757-8272 1865